कपिल विवाहको कार्ड बोकेर आफै गए सुनील ग्रोबरको घर, विहेमा जालान् डा. गुलाटी ? - PuraKhabar
कपिल विवाहको कार्ड बोकेर आफै गए सुनील ग्रोबरको घर, विहेमा जालान् डा. गुलाटी ?
पछिल्लो केही महिनादेखि भारतमा सेलिब्रेटीको विवाहको समारोह चलिरहेको छ ।
दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहले विवाह गरेको केही समयपछि प्रियंका चोपडा र निक जोनसले पनि विवाह गरेका छन् । अब केही समयमै कपिल शर्मा पनि विवाह गर्न गइरहेका छन् । कपिल शर्मा चाडै नै विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका छन् । कपिल १२ डिसेम्बरमा आफ्नी प्रेमिका गिन्नी चथरथका साथ विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका छन् ।
कपिलको घरमा विवाहको तयारी शुरु भइसकेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार कपिलले सुनील ग्रोबरलाई पनि विवाहको निमन्त्रणा गरेका छन् ।
कपिल सुनीलको घरमा आफ्नो विवाहको कार्ड दिन पुगका थिए । कपिलले स्वयं गएर विवाहको कार्ड सुनीललाई दिएका हुन् । कपिलले आफ्नो विवाहमा सुनील उपस्थित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । कपिल चाहदैन थिएकी सुनिललाई अरु कसैको माध्यमबाट कार्ड पुगोस्, जसका कारण उनी स्वयं नै पुगेका थिए ।
समाचारहरुका अनुसार सुनीलले हासेर कपिलको निम्ता स्वीकार गरेका थिए र विवाहमा उपस्थित हुने वचन दिएका छन् ।
दुबै बीच विवादको विषय अब पुरानो भएको छ । तर केही समय अघि मात्र यी दुई बिच असमझदारी बढेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । कपिल डिसेम्बरमा नयाँ शो लिएर आउँदैछन् । उनका साथ डाक्टर गुलाटी पनि कानपुरवाला खुराना बनेर १५ डिसेम्बरमा कमेडी शो ल्याउँदै छन् ।
कपिल र सुनीलको शो एकै समयमा अलग अलग च्यानमा प्रसारण हुनेछ । अर्थात कार्यक्रमको टीआरपीका लागि दुई बीच महासंग्राम हुनेछ ।
काठमाडौंको खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राख्न पर्ने